कमल थापाले भनेः ‘रोटीबेटी’को चिन्ता नेपाललाई मात्र हो ?
June 21, 2020 1:29 pm
काठमाडौं । भारतले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्राब्धान राखेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले के ‘रोटीबेटी’को चिन्ता नेपाललाई मात्रै हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन । उनले नेपालमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रवधान ठिक भएको बताएका छन ।
भारतको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष थापाले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान ७ वर्ष राख्न खोज्दा विरोध गर्नु रहस्यमय भएको पनि बताएका छन ।
शनिबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसवादी दलहरु भने सात वर्षे प्राब्धानप्रति असहमत देखिएका छन ।
अध्यक्ष थापा भने ७ वर्षे प्रावधानका पक्षमा उभिँदै उनले ट्वीटमार्फत प्रश्न गरेका छन, ‘भारतले ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरेको छ । विरोध गर्नेहरुलाई ‘रोटीबेटी’को चिन्ता नेपाललाई मात्र हो ? काँग्रेसको ताल देखेर आश्चर्य लाग्छ ।’